नयाँ शिक्षकको कथा : हँजुर नयाँ भएर !!! – DeviRam Acharya
By Deviram Acharya	 प्रकाशित मिति: Mar 12, 2019
शंकरलाल शहरमा बसेर कलेज पढ्दै थिए । एक दिन गाउँबाट बाको फोन आयो – माष्टरको जागिर खुलेको छ रे, फारम भर्नु हैँ बाबु ।
“हो त, शिक्षक सेवा आयोग खुलेको रहेछ । स्थायी माष्टर हुने कुरा छ ।” बा को आज्ञाकारी छोरो, शंकरलालले फारम भरे, बजारका २, ४ वटा गाइड पढे, ट्युशन पनि पढे । लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता, जिल्लाको सिफारिस हुदैँ मध्य नेपालको पहाडी दुर्गम गाँउको एउटा विद्यालयमा उनको पदस्थापना भयो ।
सिफारिस पत्र पेस गरेर निवेदन लेखेपछि प्रधानाध्यापकले हाँजिर वहीमा नाम लेखिदिए र हाँजिर गर्ने ठाँउ वनाइदिए ।
पहिलो दिनको जागिरमा हाँजिर गरेपछि शंकर सरको अनुहार धपक्क बल्यो । धेरै मेहनेत र जाँगर गरेर स्थायी शिक्षक बनेको नतिजाले हो, अथवा केही नयाँ गर्ने चाहनाले हो ! जे भएपनि उनी भित्रैदेखि गमक्क परेजस्तो देखिए ।
औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी, परिचय भयो । घर कता, जहान परिवार, पढाइ यस्तै विभिन्न कुरामा दिन वित्यो । पहिलो दिन पढाउने कुरा भएन ।
अर्को दिन विहान खाना खाएर, चिटीक्क परेर ठिक ९:५५ बजे शंकर सर विद्यालय पुगे ।
स्कुल खुल्ने बेला भर्खर त हुँदैछ, खै केटाकेटी आएका छैनन्, सरहरु पनि आउनु भएको छैन ।
११ बजेसम्म सबै आइपुग्नु हुन्छ । पाले दाइको उत्तर ।
अर्को दिन सँधै जस्तै ११ बजेबाट नियमितता शुरु भयो । पहिलो घण्टी शंकर सरको हाँजिर गर्ने पालो । कक्षामा गएर हाँजिर लिदै गर्दा रजिष्ट्ररमा नाम लेखेका आधा विद्यार्थी पनि थिएनन !
दिँउसोको खाजा समयमा सहकर्मी शिक्षकसँग हाँजिर गर्दाको अवस्थाका वारेमा जिज्ञासा राखे शंकर सरले र सोधे विद्यार्थी त आधा पनि आएका रहेनछन् नि !
आएकालाई पढाउने त हो । हँजुर नयाँ भएर अनौठो लाग्यो होला, विस्तारै बानी लाग्छ ।
तर, हिजो आज उनी आफूभन्दा पछि आयोग पास गरेर आएका नयाँ शिक्षकका अघिल्तिर त्यही भनिरहेका भेटिन्छन् – यहाँ त यस्तै हो, हजुर नयाँ भएर !
www.edukhabar.com मा २०७३ माघ १ मा प्रकाशित ।
एसइइ पछि के पढाउने ? अभिभावकलाई अनुरोध !